November 4, 2020 - Achawlaymyar
အာဇာနည်ကို ပိုက်ဆံတွေအများကြီး ပုံပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ အပေါ်တုန့်ပြန်လာတဲ့ The Voice ပြိုင်ပွဲဝင် သက်ရတနာကျော်ဝင်း
November 4, 2020 by Achawlaymyar
G( ခေါ် ) သက်ရတနာကျော်ဝင်း ဟာ The Voice Myanmar (Season 3) Blind Auditions သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲမှာ “It Will Rain” သီချင်းနဲ့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲဝင်စဉ်တုန်းက မြန်မာလူမျိုးဖြစ်ပြီး မြန်မာစကားကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် မပြောတတ်ဖူးလို့ ပြောခဲ့မိတာကြောင့် တချို့သော သူတွေနဲ့ ဝေဖန်မှုတွေကိုလည်း ခံခဲ့ပါသေးတယ်။ ယခုတပတ်မှာတော့ G ဟာ Battle Round ထုတ်လွှင့်မှုမှာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပေမယ့် R ဇာနည်ရဲ့ Save လုပ်သွားခြင်းကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး ပိုက်ဆံတွေပုံပေးခဲ့တယ်လို့ ကောလဟာလတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ ဒီလိုကောလဟာလတွေကို G ကအခုလိုဖြေရှင်းလာခဲ့တာပါ” အရင်ဆုံး ကျေးဇူးတင်တဲ့ စကားစပြောချင်ပါတယ် ဘယ်သူမှမလှည့်တုန်းကလည်းမနီနီလှည့်တယ်ပေါ့ မနီနီမရွေးတော့လည်း ကို R ဇာနည် Save လုပ်လိုက်လို့လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် … Read more
အအေးလှိုင်းများ လာတော့မည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၊ ဆောင်းရာသီကာလ အတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် လာနီညာ အခြေအနေသတင်း (က) အီကွေတာအနီးရှိ အပူပိုင်းပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ (Tropical Pacific Ocean)၏ ပင်လယ်ရေ မျက်နှာပြင်အပူချိန်နှင့် လေထုဖြစ်စဉ်များအရ အားနည်းသော လာနီညာ အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိနေပါသည် နိုင်ငံတကာ မိုးလေဝသဌာနများ၏ သင်္ချာပုံစံပြုမော်ဒယ်များ ခန့်မှန်းချက်အရ လာမည့်နိုဝင်ဘာလ-ဒီဇင်ဘာလများတွင် အားအသင့်အတင့်မှ အား ကောင်းသော လာနီညာအဆင့်သို့ ရောက်ရှိနိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည် (ခ) လာနီညာဖြစ်စဉ်သည် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွင် ဖြစ်ပေါ်သည့်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်သော်လည်း အဆိုပါ လာနီညာဖြစ်စဉ်ကြောင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာ ယေဘုယျအားဖြင့် ဆောင်းရာသီကာလအတွင်း ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် မုန်တိုင်းများ ပိုမိုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြင်း၊ ဆောင်းရာသီကာလ အရှေ့မြောက်မုတ်သုံလေ အားကောင်းမှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ညအပူချိန်များ လျော့နည်းခြင်း၊ အအေးပိုခြင်း၊ အရှေ့ဘက်မှ လေပွေလှိုင်းများ … Read more
သနျ့ရှငျးမှုအပိုငျးမှာ အားနညျးခဲ့တဲ့ မိနျးကလေးရဲ့ ကွောကျဖကျဖှယျရာ အဖွဈ
သန့်ရှင်းမှုအပိုင်းမှာ အားနည်းခဲ့တဲ့ မိန်းကလေးရဲ့ ကြောက်ဖက်ဖွယ်ရာ အဖြစ် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဓိက အစိတ်အပိုင်းဖြစ်တဲ့ မိန်းမအင်္ဂါကို ကောင်းမွန်စွာ ဂရုစိုက်တတ်ဖို့ အရမ်းကို အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးကြောသန့်စင်ပေးခြင်း၊ အဝတ်အစား အတွင်းခံပုံမှန် လဲလှယ်ပေးခြင်းတွေက မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့် အရာတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ် ဒီအကြောင်းအရာက ပြောပြဖို့ မသင့်ဘူးဆိုပေမယ့် တရုတ်နိုင်ငံက အသက်(၂၃)နှစ်အရွယ် Fang Fang လို့ခေါ်တဲ့ မိန်းကလေးရဲ့ အဖြစ်ကတော့ သင်ခန်းစာယူဖို့၊ ဆင်ခြင်ဖို့ကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာဖြစ်တာကြောင့် ဖော်ပြပေး လိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်နော် …။ တရုတ်နိုင်ငံမှ Fang Fang လို့ခေါ်တဲ့ မိန်းမပျိုလေးတစ်ဦးဟာ အတွင်းခံဘောင်းဘီကို တစ်လနေမှ တစ်ခါသာ လဲလှယ်ဝတ်ဆင်တတ်သူပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လလောက်မှာတော့ သူမဟာ နေထိုင်မကောင်း ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ စစချင်းမှာတော့ သိပ်ဂရုမစိုက်ဖြစ်ပေမယ့် ၁၀ ရက်လောက်အကြာမှာတော့ … Read more
အချစ်စစ် နှင့်တွေ့တဲ့အခါ အမျိုးသားတွေပြသတဲ့ အမူအရာ (၈) မျိုး….
ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ပြသတဲ့နေရာမှာ ယောက်ျားနှင့် မိန်းမ မတူပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့တွေးခေါ်ပုံချင်းကွာလို့ပါ။ အမျိုးသားတစ်ယောက်က အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို ချစ်ကြောင်းပြသတဲ့ အမူအရာတွေရှိပါတယ်။ ဘာတွေလဲကြည့်ရအောင်..။ ၁။ သင်ပြောတာကို ဂရုတစိုက်နားထောင်ပေးတယ် များသောအားဖြင့် အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားတွေထက် နားထောင်စွမ်းရည်ပိုသာပါတယ်။ အရိုးသားဆုံးပြောရရင် တချို့အမျိုးသားတွေက နားထောင်စွမ်းရည်တော်တော်ညံ့တယ်ဗျ။ အမျိုးသားတွေကသူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာကိုသာဂရုတစိုက်နားထောင်ကြတာပါ။ ဒါကြောင့် အမျိုးသားတစ်ယောက်က သင်ပြောတာကိုနားထောင်ပေးပြီး စိတ်ဝင်တစားရှိတဲ့အပြင် လေးလေးနက်နက်ပြန်ပြောတယ်ဆိုရင် သင်ဟာ သူချစ်ရတဲ့သူလို့သာ သဘောပေါက်လိုက်ပါ။ ၂။ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံဖို့ဝန်မလေးဘူး ချစ်ရသူတွေအတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့်ရမယ်ဆိုတာခက်ခဲတဲ့ အလုပ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တမ်းကျတော့ သူချစ်ရတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် မပျော်မရွှင်ဖြစ်နေရင် နေမထိထိုင်မသာဖြစ်ရတာက အမျိုးသားတွေပါ။ မင်းရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအတွက် စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံပေးခဲ့တယ် ဆိုတာက မင်းအတွက် သူ့ရဲ့အချစ်ကိုပြသတာပါ။ ၃။ သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုပြသတယ် အမျိုးသားတွေက သူတို့ရဲ့အားနည်းချက်ကို အခြားတစ်ယောက်ကရိပ်မိမှာ အရမ်းစိုးပါတယ်။ဒါပေမယ့် ချစ်မိသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီအချက်ကို ဂရုမစိုက်တော့ပါဘူး။ ချစ်ရတဲ့သူကကိုယ့်ရဲ့ အားနည်ချက်ကိုသိထားစေချင်တာက … Read more
အောင်လအန်ဆန်း နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူတွေ သိပ်မသိသေး တဲ့ အကြောင်းအရာ (၇) ချက် အသေးစိတ်
(၁) ငယ်ဘဝ သူရဲကောင်း – ကလေးတော်တော်များ နည်းတူ အောင်လဟာ သူ့မိသားစုမှာတော့ သူ့မိဘတွေရဲ့ အသဲစွဲ ဖြစ်ခြင်း ခံခဲ့ရပါ တယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ အောင်လဟာ သူ့ဖခင်ဆီကနေတဆင့် လူ့ကျင့်ဝတ်တွေ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို စံနမူနာထားပြီး ကြီးပြင်းခဲ့ရသူ လည်း ဖြစ်ပါတယ် “အဖေက အတန်းပညာ ၄ တန်းထိသာ သင်ခဲ့ရပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ မိသားစု ဝင် ၅ ဦး စလုံးအပေါ် အမြဲ ဂရုတစိုက် ရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီး သူပညာမတတ်ပေမယ့် ကျွန်တော့်ကိုတော့ ပညာတတ်ကြီး ဖြစ်အောင် တက္ကသိုလ်ထိ ပို့ပေးနိုင်သူပါ။ ကျွန်တော့် ဘဝအတွက် သူရဲကောင်းပါပဲ”လို့ အောင်လက သူ့အဖေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောပြပါတယ်။ (၂) ကိုယ်ခံပညာက ငယ်စဉ်ကတည်းက လွှမ်းမိုးခဲ့ – အောင်လက … Read more
မိန်းမ တွေ ချစ်လို့ မ၀နိုင်ဖြစ်ပြီး ဘယ်တော့မှ ပြစ်မသွားနိုင်တဲ့ လင်ဖြစ်ဖို့…..
မိန်းမ တွေ ချစ်လို့ မ၀နိုင်ဖြစ်ပြီး ဘယ်တော့မှ ပြစ်မသွားနိုင်တဲ့ လင်ဖြစ်ဖို့ ခင်ပွန်းကောင်းဆိုတာ…. ( 1 )နံနက်အိပ်ယာထတဲ့အခါ “ မင်းနေကောင်းလား၊ ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်နော် ” စိုးရိမ်စကား ပြောပေးတတ်သူ။ (2) နံနက်စာစားတဲ့အခါ “ ကော်ဖီ ၁-ခွက် ကို ၂-ယောက် တူတူသောက်ကြရအောင်ကွာ ” မျှဝေခံစားတတ်သူ။ (3) နံနက်စာ ပြင်ဆင် (သို့ မဟုတ်) စားသောက်ပြီးတဲ့အခါ ပန်းကန်ခွက်ယောက်ကူသယ်/ကူသိမ်းပေးတတ်သူ။ (4) ထမင်းစားတဲ့အခါ “လက်ရာကတော့ရှယ်ပဲ…ယောကျာ်း အကြိုက်သိ တဲ့ မိန်းမ..ငယ်ငယ်တုန်းက စားခဲ့တဲ့ မေမေ့လက် ရာ အတိုင်းဘဲ” ချီးမွမ်းမြှောက်ပင့်ပြောတတ်သူ။ (5) အလုပ်သွားခါနီးတိုင်း … Read more
ဖောင်ကြီးမှာလုပ်အားပေးတာဝန်ပြီးဆုံးပြီမို့ ဆေးစစ်ချက်အဖြေအတွက် ပရိသတ်ကြီးကို ဆုတောင်းပေးဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ အလှမယ် L ဘောက်နူး
ဖောင်ကြီးမှာလုပ်အားပေးတာဝန်ပြီးဆုံးပြီမို့ ဆေးစစ်ချက်အဖြေအတွက် ပရိသတ်ကြီးကို ဆုတောင်းပေးဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ အလှမယ် L ဘောက်နူး Miss Supranational Myanmar 2015 ရဲ့ First Runner Up ဆုရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ L ဘောက်နူးကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ လက စံပြအလှမယ်တစ်ယောက်ပီပီ ကိုဗစ်ကာကွယ်ကုသရေးစင်တာတွေမှာ လုပ်အားပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ဖောင်ကြီးကာကွယ်ကုသရေးစင်တာမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ L ဘောက်နူးကတော့ ကျရာနေရာမှာ လုပ်အားပေးကူဖို့ ရည်ရွယ်ထားသူဖြစ်ပေမယ့် သူနာပြုအတတ်ပညာလည်း သင်ကြားထားဖူးသူမို့ အကူသူနာပြုအနေနဲ့ ဖောင်ကြီးမှာ လုပ်အားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် လုပ်အားပေးနေစဉ်တလျှောက်မှာလည်း ပျော်ရွှင်တက်ကြွစွာနဲ့ တာဝန်ကျေပွန်အောင် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ဒီနေ့စက်တင်ဘာ(၄) ရက်နေ့မှာ တစ်လပြည့်ဖို့တစ်ရက်လိုသေးပေမယ့် တစ်ယောက်တည်းခွဲပြန်ရမှာအဆင်မပြေတာကြောင့် ဒီနေ့(၄) ရက်နေ့ပြန်မယ့်အဖွဲ့နဲ့ လိုက်ပြန်တော့မှာဖြစ်ကြောင်း မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ ဖောင်ကြီးကုသရေးစင်တာက လုပ်အားပေးအတွေ့အကြုံလေးတွေကိုလည်း နောက်နေ့တွေမှာ သေချာမျှဝေပေးသွားဦးပါမယ်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးရေ.. ဒါ့အပြင် … Read more
ယောက်ျားတိုင်း လိုလို ချင်ချင်နဲ့ မက်မောတဲ့ မိန်းမ ဆိုတာ….
ယောက်ျားတွေလိုချင်တာ ဒီလိုမိန်းမမျိုးပါ။ယောက်ျားတစ်ယောက်က ပြောတယ် (၁) မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ သိပ်ချောသိပ်လှစရာမလိုဘူး။ လူကြားသူကြားထဲခေါ်ထွက်လို့ရပြီး အိမ်အပြန်ခေါ်ပြန်လာလို့ရရင် ရပြီ။ (၂) ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့အတိတ်ကို ငါလိုက်မမေးဘူး။ ဒါပေမယ့် ငါနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့နောက် ငါ့တစ်ယောက်တည်းကိုပဲ ကောင်းကောင်းချစ်ရင် ရပြီ။ (၃) အလုပ်လုပ်ချင်ရင် အလုပ်တစ်ခုရှာလုပ်နိုင်တယ်။ မလုပ်ချင်ရင် အိမ်မှာပဲ အိမ်ရှင်မအဖြစ် ပီပီသသနေ။ နင့်ကို ငါယူရဲရင် နင့်ကိုကျွေးနိုင်တဲ့အား ငါ့မှာရှိတယ်။ (၄) တခြားလူလောက် ငါချမ်းသာချင်မှ ချမ်းသာမယ်။ ဒါပေမယ့် တခြားလူ နင့်ကိုပေးနိုင်တဲ့အရာ ငါလည်းပေးနိုင်တယ်။ (၅) နင့်အနားမှာ ငါနေ့တိုင်းအဖော်ပြုနိုင်ချင်မှ ပြုနိုင်မယ်။ ဒီအိမ်အတွက် ငါအပြင်ထွက် ရုန်းကန်ရမယ်။ ဒါပေမယ့် ငါ့ဖုန်းဘယ်တော့မှ ပိတ်မထားဘူး… ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ် ငါ့ကို နင်ရှာတွေ့နိုင်စေရမယ်။ (၆) သူငယ်ချင်းတစ်သိုက်နဲ့ ငါ ထွက်သောက်ဖြစ်တဲ့အခါတိုင်း နင့်ကိုငါခေါ်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် … Read more
ဘရာဇီးနိုင်ငံ လမ်းပေါ်မှာ တွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့ တစ်သက်မှာတစ်ခါ ကြုံချင်မှ ကြုံရမယ့် မြင်ကွင်းတခု.. ပြီးခဲ့တဲ့လ ၃၁ ရက်နေ့က ဘရာဇီးနိုင်ငံ (Sao Pao Laulo ဆောင်ပေါင်လူးခရိုင် အီတူဝေလာဝါမြို့နယ် နားက Faculty တက္ကသိုလ်အနီး လမ်းမတစ်ခုတွင် (Anaconda) မြွေကြီးတစ်ကောင် လမ်းဖြတ်ကူးနေတာကို Dr. Francisco Maeda မှ တွေ့မြင်ခဲ့ပုံကို ကြောက်ကြောက်နဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားပုံပါ ဧရာမမြွေကြီးဟာ ပုံပါအတိုင်းသူတစ်ကောင်တည်းမဟုတ်ဘဲ နောက်တော်ပါး အခြားမြွေအမျိုးအစားမတူသည့် ၅ ကောင်ဟာ ရစ်ပတ်နှောင်တွယ်ပြီး ထပ်ချပ်မကွာလိုက်လာပုံက မြင်ရသူအဖို့မှင်သက်သေနေမိပါတယ် ။ ဒီလိုမြင်ကွင်းမျိုးက တစ်သက်မှာတစ်ခါ ကြုံချင်မှကြုံရပါမည် ။ အင်မတန်ထူးခြားနေပါသည် ။ ရုပ်သံကိုအောက်မှာတင်ပေးထားပါတယ် (စည်သူမောင်) Unicode ဘရာဇီးနိုငျငံမှာ တှမွေ့ငျခဲ့ရတဲ့ တဈသကျမှာတဈခါ ကွုံခငျြမှ ကွုံရမယျ့ မွငျကှငျး … Read more
အခုလိုရောဂါကာလအခြေအနေတွေကြောင့် အသွားအလာကန့်သတ်မှုတွေ ဖြေလျော့ပေးလိုက်ပေမဲ့လည်း ၊ လူအများစုကတော့ အပြင်သိပ်မထွက်တော့ဘဲ Delivery များကိုသာ အားကိုးပြီး လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယနေကြဆဲပါဘဲ ။ သို့ပေမဲ့လည်း Delivery သမားတွေဟာ ရာသီဥတုအခြေအနေ ၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ တွေသာမက ခွေးတွေရဲ့ ရန်ကနေလည်း ကြောက်ရွံ့နေရတာကို ယခုဖော်ပြမဲ့ video မှာ အထင်းသားကြီးမြင်တွေ့နေရမှာပါ ။ ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း မလေးရှားနိုင်ငံမှ J&T deliveryman တစ်ဦးဟာ ပစ္စည်းသွားပို့ရင်း အဆိုပါနေအိမ်မှ ခွေးဟာ သူ၏နေအိမ်သို့သူစိမ်းဝင်ရောက်မည်ဆိုးသောကြောင့် deliveryman အား အတော်လေးကို ဟောင်းနေခဲ့ပါတယ် ။ သို့ပေမဲ့လည်း deliveryman မှာ လုံးဝကိုကြောက်ရွံ့နေပုံမရပဲ အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာ အိမ်အပြင်ဖက်တွင်ရပ်နေခဲ့ပေမဲ့ ထိုအချိန်မှာ ရုတ်တရက်လမ်းဘေးခွေးတစ်ကောင်မှာ အရှိန်ဖြင့် စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ကာ အဆိုပါdeliveryman ဆီသို့ ပြေး၍လှမ်းကိုက်ဖို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတော့တယ် … Read more